Inona no ho hitanao ao Cáceres: tamban-kavoana miavaka | Vaovao momba ny dia
Louis Martinez | | España, Inona no ho hita, Tsangatsangana
Sarin'ny Ben'ny tanàna Plaza ao Cáceres
Ny mitsidika an'i Cáceres dia mandinika ny tantaram-piainana, satria izy io dia natsangan'ny Romana ho tanàna tao amin'ny taonjato voalohany BC. Noravan'ny Visigoths, dia teraka indray tamin'ny Arabo ary resin'ny Kristiana tamin'ny 1229, izay nanome azy ny toeran'ny tanàna iray eo ambany fifehezan'ny Satroboninahitra liona.
Ny aristokrasia an'i Cáceres dia zava-dehibe tamin'ny andron'ny Monarchs katolika sy i Carlos I. Avy eo dia niaina vanim-potoanan'ny fahalovana hipoitra indray tamin'ny taonjato faha-XNUMX tamin'ny nananganana azy tao amin'ny Royal Cour of Extremadura sy ny fahatongavan'ireo mpifindra monina avy amin'ny faritra hafa an'ny Espana. Nitohy tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX ny fivoarany. Nijanona tao Cáceres izany rehetra izany lova miavaka miavaka fa hahaliana anao tokoa ny hahafantatra.
1 Ireo tsangambato tokony hitsidihanao any Cáceres
1.1 Tanànan'ny Cáceres taloha
1.2 Ben'ny tanàna La Plaza
1.3 Kianja Santiago
1.4 Kianja San Juan
2 Cáceres voajanahary
Ireo tsangambato tokony hitsidihanao any Cáceres
Ny tantara manankarena ao an-tanànan'i Extremaduran dia hita taratra amin'ireo tsangambato marobe izay hitanao ao. Na izany aza, ny tanana haolo Ilaina ny fitsidihana an'i Cáceres, satria izy io Lova eran-tany nanomboka tamin'ny 1986. Hanomboka ny fitsidihantsika ny tanàna izahay.
Tanànan'ny Cáceres taloha
Ny tanànan'ny Cáceres taloha dia manana ny fotony ao amin'ilay toerana voafaritry ny taloha rindrina romanina (Io ilay fantatra amin'ny anarana hoe Tanàna taloha na lehibe), nefa koa misy tranobe manan-tantara ivelan'ireo.
Ho setrin'izany, ny ivon-toeran'ny Old City dia ny fihaonan'ireo Plaza de los Golfines sy ny Plaza de Santa María, izay mandrafitra toerana lehibe feno tsangambato. Io faritra io no manjaka katedraly Santa María, fahagagana gothic tany am-boalohany izay mbola hita ny fomba Romanesque. Na izany aza, ny tilikambony tokana dia ny Renaissance ary satroboninahitr'i San Pedro de Alcántara.
Saingy, raha tianao ny ivelany, dia hanaitra anao bebe kokoa ao anaty izany. Precious no takelaka lehibe, amin'ny fomban'ny Plateresque, izay ananan'ny aloan'ny sakristy koa. Mikasika ireo trano fiangonana, ao amin'ny Blázquez dia azonao jerena ny sary sokitra amin'ilay antsoina hoe Kristy Mainty an'ny Cáceres, tamin'ny taonjato faha-1703, ary tao San Miguel dia manana alitara baroque tsara tarehy ianao. Taova iray avy amin'ny XNUMX no mamarana ny hatsaran'ity tempoly ity izay Tsangambato ara-javakanto manan-tantara avy amin'ny 1931.
Sarin'ny lapan'ny Veletas
Etsy ankilany, manodidina ny katedraly ianao dia afaka mahita lapa maro sy trano aristokratika. Anisan'ireo teo aloha ny Lapan'i Carvajal, natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX; ny Episkopaly sy Hernando de Ovando, samy Renaissance no Golfines de Abajo, izay manambatra an'io fomba io amin'ny fampahatsiahivan'ny Gothic.
Trano hafa mahaliana ao amin'ny Old City dia ny fiangonana Gothic any San Mateo; ny Palace of the Storks, miaraka amin'ny tilikambony manambolo; ny Lapan'ny Veletas, izay ahitanao ny lavaka famorian-drano Almohad tranainy indrindra ao an-tanàna; ny tranon'ny soavaly, izay fitoeran-tranon'ilay teo aloha, sy ny an'ny Masoandro, ary ny famaritana azy amin'ny fasade. Azonao atao koa ny miditra ao amin'ny Old Yahudi Quarter of Cáceres.
Ben'ny tanàna La Plaza
Fa i Cáceres, toa tanàna hafa any Extremadura, mbola manolotra tsangambato hafa maro ho anao. Amin'ny fifaninanana akaiky amin'ilay faritra voalaza etsy ambony, dia ny ben'ny tanàna Plaza, any amin'ny ilany atsinanana amin'ny rindrina. Ity dia niampita marina ny Star Arch, izay niandohany dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX, fa izay novaina tamin'ny taonjato faha-XNUMX avy amin'i Manuel de Lara y Churriguera.
Ao amin'ny faritra atsimo amin'ny kianja dia misy ny Foro de los Balbos miaraka amin'ny andrin'i San Francisco, toeram-pisotroana fisotroana Plateresque tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Fa ny manintona lehibe an'ity habakabaka ity dia ny mampikatso Tilikambon'i Bujaco, fananganana arabo izay niafara tamin'ny ady.
Sarin'ny Arch of the Star
Hevitra misongadina ao fiangonan'i Santiago de los Caballeros ary ny Lapan'i Francisco de Godoy. Saingy, amin'ny manodidina azy dia ho hitanao ihany koa ny fananganana ny Mpihaino Royal, natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ny tilikambo Coria sy ny andohalambo Socorro, ny lapan'ny fanisana an'i Santa Olalla ary ny Marquis of Camarena na ny tranon'i La Culebra, ankoatry ny tsangambato hafa.
Kianja San Juan
Izy io dia tarihin'ny fiangonan'i San Juan de los Ovejeros, izay fehezin'ny lapa isan-karazany na trano mendri-kaja toa ny an'ny Marquis de Oquendo, ny an'ny Marquis de Monroy ary ny tranon'i Ovando Espaderos. Manakaiky an'ity kianja ity dia ho hitanao ihany koa ny Great Theatre, trano tsara tarehy tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ary, somary lavitra, ny Mochada Tower sy ny hermitages toa an'i Las Candelas na San Ildefonso.
Araka ny hitanao dia misy tsangambato maro izay tsy maintsy hitanao ao Cáceres. Saingy ny tanànan'ny Extremaduran dia manome anao ihany koa ny endrika mahafinaritra sy ny mahasalama.
Cáceres dia eo anelanelan'ny Sierra de la Mosca sy Sierrilla. Noho izany, ny manodidina azy dia manolotra tontolo tsara tarehy sy tontolo voajanahary. Amin'io lafiny io, ny Los Arenales complex, noforonin'ny lagoon telo tany andrefan'ny tanàna.
Etsy ankilany, raha tianao ny Ornithology, any Cáceres dia manana lalan-drà ianao. Izany dia faritra fiarovana manokana valo ho an'ny vorona. Ary ao amin'izy ireo no miavaka ny isan'ny mponina kestrel.
Sarin'ny lapan'ny episkopaly ao Cáceres
Ny gastr gastrikan'ny Cáceres no valin'ny ny fitambaran'ny nahandro Castilian miaraka amin'ny akanjo arabo sy Sephardic. Ho fanampin'izany, maro amin'ireo vokatra novokarina tao amin'ny faritany no nanana ny fanondroana ny fiaviany, izay manatsara kokoa ny gastronomie. Ity no tranga Iberian ham, paprika avy any La Vera, Torta del Casar na serizy avy any Jerte.
Anisan'ireo lovia azonao andramana ao Cáceres ary tsy hamela anao tsy hiraharaha izany ny chanfaina, laoka vita amin'ny zanak'ondry na henan-kisoa, tongolo, ravina bay, sakay ary karazana legioma izay mety tsaramaso na ovy. Ho tianao ihany koa ny endasina, miaraka amin'ny ovy, zanak'ondry ary paprika; ny Voahangy Extremadura; ovy namboarina miaraka amin'ny sombin-tsakafo tench sy Extremadura.
Toy ny tsindrin-tsakafo mamy, manana ianao ny alika kely, ny florets na ny pestiños. Ary, hanasana ny sakafo, manana ny tsara ianao divay avy amin'ny Ribera del Guadiana sy ny Tany Extremadura, ireo antsoantso divay roa niavian'ny Cáceres.
Raha fintinina, betsaka ny zavatra tsy maintsy hitanao ao Cáceres. Ary ny zavatra tsara indrindra dia satria, noho ny toerana misy azy eo amin'ny jeografia, dia akaikin'ny tanàna Espaniola maro hafa izy io. Noho izany, azonao atao ny mitsidika azy amin'ny faran'ny herinandro na amin'ny faran'ny herinandro lava.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Cáceres, inona no ho hitanao ao an-tanàna izay hahatonga anao ho tia